လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်မတော်တဆကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ခံခွေးတွေ၏နံပါတ်တစ်တစ်ဟုန်ထိုးမြင်ကြပြီ. အဆိုပါခွေးတွမ်ရှဲလ်, Stella, သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ရုံရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်, သူကတကယ့်မျိုးနွယ်ပေါ်မှာရှာတွေ့မှအိမ်ပြန်.
ဘယ်အချိန်မှာ Shell ကအိမ်ရှေ့တံခါးမှတဆင့်, သူမ၏သြစတြေးလျသည်သိုးထိန်း Mini-အဟောင်းကို 13 နှစ်အိပ်ရာပေါ်လဲလျောင်းခဲ့သည်, ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးကြည့်ရှု. ပထမဦးဆုံးမှာ, il pensait que le chien était en train de faire une crise de glaucome parce qu’elle avait “l’air un peu voilé”. သို့သော် Stella အဆိုပါအိပ်ရာထဲကနေချော်နဲ့ Shell က၏ညှနျကွားထိ မိ. လဲစတင်ခဲ့သည့်အခါ, စနစ်တကျလမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်း, သူတစ်ခုခုကယ့်ကိုမှားသိတယ်.
စိုးရိမ်သော, Shell ကထိုအိပ်ရာပေါ်ပေးအပ်. ဒါဟာသူသညျမိမိရုံးဖို့တံခါးဖွင့်ခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိသောဤအချိန်တွင်ခဲ့သည်. မိမိအကျောပိုးအိတ်၏အကြွင်းအကျန်အခန်းအလယ်၌အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားကိုက်ခံခဲ့ရ.
လည်းဖတ်ကြည့်ပါ: THC နှင့် CBD အချိုး၏အရှုပျထှေးကမ္ဘာကြီးနားလည်ခြင်း
Il s’est rendu compte qu’il était revenu chez lui avec un chien absolument blazed – un problème croissant alors que les mauvaises herbes légales rendent les aliments de plus en plus puissants et attrayants plus accessibles à travers l’Amérique. တောင်မှပေါင်းပင်၏စားသုံးမှုသမျှမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တရားမဝင်သည်အဘယ်မှာရှိပွညျထောငျစုတှငျ, ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကပိုလက်ခံဖြစ်လာကြပြီ.
အဆိုပါအညီ အဆိပ်စင်တာ de l’ ASCP , အဆိုပါရရှိနိုင်တိုင်ကြားမှု 24 နာရီ 24 လက်ခံရရှိ 208 ဆေးခြောက်-related ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု 2008, 979 တွင် 2016 နှင့် 1 486 တွင် 2017. တွင် 2018, အလယ်ဗဟိုတွင်လက်ခံရရှိ 1 800. ဤသည်၏အဖြစ်တိုးကိုယ်စားပြုတယ် 765% အပေါ် 10 နှစ်ပေါင်း.
အဆိုပါဖွင့်လှစ် hotline 24 နာရီ 24 လက်ခံရရှိ 208 ဆေးခြောက်-related ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု 2008. တွင် 2018, အလယ်ဗဟိုတွင်လက်ခံရရှိ 1 800.
ဒေါက်တာ Tina Wismer, အဆိုပါ ASPCA ၏ Call Center ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ, အတိတ်ကာလကပြောသည်, la majorité des appelants étaient des propriétaires d’animaux de compagnie dont les chats et les chiens se mêlaient à du “matériel végétal”, စွန့်ပစ်ပိုးဟပ်နဲ့တူ. သူမသည်မကြာသေးမီနှစ်များ၏သားကောင်မှဆက်စပ်ဆေးခြောက်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့တိုး၏အစိတ်အပိုင်း attributes, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များကိုမြက်ခင်းကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောကြောင်းယခုခေါ်ဆိုမှုလိုင်းဖုန်းဆက်ဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိဖြစ်အံ့သောငှါအသိအမှတ်ပြု.
သို့သော် Wismer လည်းမြင့်တက်အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်အစားအသောက်ထုတ်ကုန်တွေအတွက်ကျယ်ပြန့်ရရှိမှု attributes. အဆိုပါဥပဒေရေးရာထုတ်ကုန်ပုံမှန် pastry အနံ့ရှိ. အဘယ်အရာကိုတိရိစ္ဆာန်သကြားလုံးကိုတှနျးလှနျနိုငျပါသညျ? (ကြောင်မိဘများ, အသိပေးစာ: Wismer ကြောင်အမြဲတမ်းဖူးအငုံထွက်မှဖြောင့်မသွားလေ့ကပြောသည်။)
လူ့စားစရာဘို့ခွေးများ၏အစာစားချင်စိတ်ကိုတကယ်အပ်လှုံ့ဆျောကားအဘယ်သို့. “Chiens, ဘုရားရေ, အထူးသဖြင့်ချောကလက်ကနေအစားအသောက်ထုတ်ကုန်တွေနှင့်အတူ, le nombre d’appelsaexplosé”, Wismer တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်.
အခုတော့ဥပဒေရေးရာနိုင်ငံသားများအဖြစ်လျင်မြန်စွာတစ်ဦးပီဇာအဖြစ်၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏စားသုံးနိုင်သောထုတ်ကုန်ရယူနိုငျကွောငျး, တစ်သွေ brownie ဖုံးကွယ်ခြင်းမရှိတော့မယ့်ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်. ဆယ်နှစ်ရှိပါတယ်, သူကမကျေနပ်ကြပါဘူးသောအခါ, လူတွေကသော့ခတ်စားသုံးနိုင်သော၎င်းတို့၏အစားအစာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြ. ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကမွှေး THC စတော့ရှယ်ယာရှိပါတယ်သည့်အခါ, သူကတစ်စက္ကန့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုထိုက်ပါဘူး.
ဘယ်ကိုပြန် Shell ကမှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏, သူကိုလုံးဝပြုတ်သည်သူ၏ခွေးကိုရှာဖွေအိမ်ပြန်ခဲ့.
အခွံ, Los Angeles မြို့အခြေစိုက်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ, အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသူ့ကို vanilla နှင်းခဲဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရက်ရက်ရောရောကိုကမ်းလှမ်းအိမ်လုပ် brownie ခဲ့အခါ set ကိုအလုပ်လုပ်. မြက်ခင်းပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာစိတ်အေးလက်အေးကာလီဖိုးနီးယားယဉ်ကျေးမှု၌ငါးဆယ်နှစ်ကြာပြီးနောက်, Shell ကပလတ်စတစ်အိတ်များတွင်စားသုံးနိုင်သောအရှက်ကိုနှင်ထုတ်, မိမိအကျောပိုးအိတ်ထဲမှာနှင့် "တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့မေ့".
သို့သော်ခွေးတစ်ဦးရှိ r emarkable ၏အဓိပ္ပာယ် l’ အနံ့ ; သူတို့ 300 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြောက်လသန်းသန်း olfactory receptors. တစ်ဦးကပလပ်စတစ်အိတ် Stella များအတွက်ပွဲစဉ်မဟုတ်ခဲ့, အဆိုပါ brownie ကို sniff မှစီမံခန့်ခွဲသူကို, အဆိုပါကျောပိုးအိတ် Shell ကကိုက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်စားရန်.
“Elle avait aussi un air un peu penaud, comme quand elle se met à la poubelle”, ဟုသူကပြောသည်ထားပါတယ်. “Elleamangé une partie du sac aussi, je pense.”
အဆိုပါခွေးရှဲလ်, Stella, အိုးတလုံး brownie စားပြီးနောက်ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်.
image ကို: Tom shell ကို
Les chiens sont particulièrement sensibles aux mauvaises herbes – selon လျှော်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Daily သတင်းစာ , သူတို့တက်များမှာ 10 THC မှလူသားမြားသထက်အဆကျပိုအထိခိုက်မခံ. ဒေါက်တာကဲန် Pawlowski, ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်တိရိစ္ဆာန်ဆရာ, ယင်းကိုပြောသည် Los Angeles Times က que “les chiens ont plus de récepteurs de cannabinoïdes que tout autre animal que nous connaissons”.
ထိုအ THC ၏ပမာဏအနေဖြင့် (ဆေးခြောက်ထဲတွင် psychoactive ပစ္စည်း) စားသုံးဆီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါသည် တင်းကြပ်စွာစညျးမဉျြးစညျးကမျး သူတို့တရားဝင်ရောင်းချရှိရာပြည်နယ်များရှိ, အိမ်လုပ်သကြားလုံး၏တန်ခိုးတစ်ဦးရိုင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါသည်. ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ, စားသုံးဆီထုတ်ကုန်ထက်ပိုမဆံ့မရမယ် 100 အထုပ်နှုန်းမီလီဂရမ် THC နှင့် 10 အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နှုန်းမီလီဂရမ်.
Shell ကထိတ်လ: “Je ne savais pas quel type de dosage de THC avait ce type là. သူသည်သင်တို့အပေါင်းကိုစားနိုင်ကပြောပါတယ်, mais je savais que c’était bon pour deux personnes.”
ခွေးအတွက်ဆေးခြောက်စားသုံးမိလက္ခဏာတွေ ataxia ပါဝင်သည် (သူတို့ယစ်မူးခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်လှိုသို့မဟုတ်ထိ မိ. လဲ), အသံမှ overreacting နှင့်လှုပ်ရှားမှု, ဆီးမထိန်းနိုင်, dilated ကျောင်းသားသို့မဟုတ် glassy မျက်စိ, ပြင်းထန်တဲ့ကိစ္စများတွင်, အနိမ့်သွေးပေါင်ချိန်ခြင်းနှင့်နိမ့်နှလုံးခုန်နှုန်း. ထိုအသွေးကိုဖိအားနဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းခွေးစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နိမ့်အဆင့်ဆင့်မကျခဲ့လျှင်, ကဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ်.
သူ Stella စားပြီးမှနားလည်ပြီးတာနဲ့, Shell ကအရေးပေါ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးစင်တာမှသူ့ကိုသိမ်းပိုက်. "ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးဖခင်" အဖြစ် Feeling, ဝန်ထမ်းများသူ့ကိုအန်သွေးဆောင်ဖို့မူးယစ်အပ်ပေးတော်မူ၏နဲ့ချောကလက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရရှိသည်အထိသူစောင့်ဆိုင်း (ဒါ့အပြင်ခွေးအဆိပ်အရာဖြစ်ပါသည်), ထို့နောက်သူ့ကိုအန်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ပိုပြီးဆေးပေးခဲ့တယ်. ခွေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတည်ငြိမ်များမှာပြီးတာနဲ့, ကသာခွေးပြိုကျခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်နေဆဲ. အဲဒီမှာအဖြစ် အနည်းငယ်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ တိရစ္ဆာန်များအတွက်ဆေးခြောက်, il est difficile de déterminer avec quelle rapidité un chien peut métaboliser les mauvaises herbes – bien que la plupart des vétérinaires s’accordent pour dire qu’ils ressentent les effets အများဆုံးပြင်းထန်စွာ လူသားမြားသကြောင်း.
Wismer တိရိစ္ဆာန်ဆရာတစ်ခါတစ်ရံပြားစေရန်အဆီအနေနဲ့ဆေးထိုးနှင့်အတူခွေးလိုဆကျဆံသူကပြောပါတယ်; cannabinoids တွင်ပျော်ဝင်နေသောအဆီတွေဟာကတည်းက, ils “se lient aux composés et aident le chien à se réveiller plus rapidement”. သို့သော်မကြာခဏ, ခွေးများ၏သွေးဖိအားတည်ငြိမ်လျှင်, အဆိုပါ VET ရိုးရှင်းစွာအိမ်ပြန်နှင့်စောင့်ကြည့်ရန်၎င်း၏ပိုင်ရှင်များကိုမေး.
ဒီတော့ Shell ကစောင့်ဆိုင်း. “J’ai ramené Stella à la maison et elleaété lapidée comme elle le sera pour le reste de l’après-midi”, Shell ကဆိုပါတယ်. Il est presque certain que le chien «appréciait la balade» – elleapassé la nuit à manger des en-cas et à se pelotonner à côté de lui.
“Elle était très collante … mais d’une manière douce”, Shell ကဆိုပါတယ်. “[Stella] စိတ်ဆိုးမထင်ခဲ့ဘူး. သူမသည်လူတွေန်းကျင်ဖြစ်လို, c’est sûr.”
တိရိစ္ဆာန်ဆရာတိရိစ္ဆာန်ဆရာကိုပဌနာဖို့အမြန်နေမြဲနေစဉ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စက်မှုလုပ်ငန်းလည်းဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်သို့ delves, သူတို့ psychoactive မဟုတ်ရင်တောင်. CBD နှင့် CBD-based ရယူထားသောပြင်းထန်နာတာရှည်နာကျင်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာကုသမှုအဖြစ်လူကြိုက်များလျက်ရှိသည်အခြေစိုက်ဆိုးဆေးများ, ဒါပေမယ့်နည်းနည်းသုတေသနခွေး THC metabolize ဘယ်လိုကောက်ယူထားပြီး, CBD နှင့်အခြား cannabinoids. (CBD စားသုံးနိုင်သောတိရစ္ဆာန်အရညျအသှေးပုံသညျလူသားတို့အပေါ် operate, တစ်သူရဲအညီ SF ဂိတ် သူတို့သညျလူသားတို့အတှကျ CBD ထုတ်ကုန်ကဲ့သို့တူညီသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့လျှင်ကြည့်ဖို့သကြားလုံး shaped အရိုးလက်ဆွန်းစားသောသူသတင်းစာဆရာ။)
min Lee က, အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အတွက်သမ္မတ ရိုးသားယက် , ကြောင်းရေနံ CBD နဲ့သူ့ရဲ့ခွေးရယူထားသော infuses, တင်းကျပ်စည်းမျဉ်းများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ THC နှင့်အတူညစ်ညမ်းလျက်ရှိသည်တားဆီးလိုလား. Il craint que les sociétés productrices de cannabis ne fabriquent pas de produits spécifiquement destinés aux animaux et qu’elles “reconditionnent les produits destinés aux humains” sans consulter au préalable les vétérinaires des effets secondaires potentiels.
“Malheureusement, l’industrie des animaux de compagnie sera toujours un peu plus lente à adopter des réglementations et des normes que l’industrie humaine uniquement parce que les humains ont voix au chapitre”, သူတစ်ဦးကတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်.
Wismer အဆိပ်ထိန်းချုပ်မှု hotline သူ၏ခွေး CBD မှသကြားလုံးတွေအများကြီးစားခွေးတွင်တွေ့မြင်သူတွေကိုကဲ့သို့တူညီသောရောဂါလက္ခဏာတွေရှိခဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်.
“Personne ne réglemente ces produits – y a-t-il réellement une certaine quantité de THC dedans?” elleademandé. သို့မဟုတ်ပါကခွေးကလူ၏ကွဲပြားခြားနားသော metabolites ထုတ်လုပ်ကြောင်း? ဒါဟာထိုး-ဆက်စပ်ရုံဖြစ်ပါသည်? ကံမကောင်းသဖြင့်, ဘယ်သူမှတကယ်အဖြေကဘာလဲဆိုတာသိတယ်. "
THC သူ့ဟာသူခွေးအဆိပ်သင့်မဖြစ်. Certains propriétaires d’animaux pensent que l’effet “entourage”, တစ်ဦးတည်းကကုသမှုမရှိဘူးဆေးခြောက်ရွက်များတွင် psychoactive ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်မဟုတ်တဲ့ psychoactive ပစ္စုပ္ပန်၏ပေါင်းစပ်, နာကျင်မှု၏ကုသမှုများအတွက်ရိုးရှင်းစွာ CBD ထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်. Lee ကအညီ, ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းလူ့စားသုံးမှုများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်, ခွေးချောကလက်တွေဟာအစာကြေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ချယ်ရီသီး, xylitol နှင့် macadamia အခွံမာသီး. Wismer ချောကလက်သွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုထိခိုက်နိုင်သည်ကိုပြောပါတယ်, သေဆုံးမှု၏တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်မှခွေးဖော်ထုတ်. သို့သော်ကြောင့်ဘယ်လို THC အပေါ်သုတေသနပြု၏မရှိခြင်း, CBD နှင့်အခြား cannabinoids ခွေးကိုထိခိုက်, ဒါကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ CBD ထုတ်ကုန်အတည်ပြုအကြောင်းကိုသတိထားဖြစ်ပါသည်.
၏ကလေးမွေးစားခြင်း လယ်ယာဘီလ် တွင် 2018 တရားဝင်လျှော်, မူးယစ်ဆေးကုထုံးသက်ရောက်မှုအပေါ်ထပ်မံလေ့လာမှုများများအတွက်လမ်းခင်းနိုင်သည့်. ဒါပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာနေဆဲလူနာဆေးခြောက်သတ်မှတ်လို့မရဘူး, နှင့် Wismer အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များဖို့ CBD ရယူထားသောအကြံပြုဖို့တှနျ့ဆုတျ, အထောက်အထားအကြီးအကျယ်သို့ရာတွင်သောကွောငျ့.
“Le problème est que nous ne savons pas quelle est la bonne dose pour traiter des choses différentes”, သူမကပြောပါတယ်. “La dose est-elle différente pour traiter la douleur que pour traiter l’anxiété?"
သငျသညျနာကျင်မှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်သင့်ရဲ့ခွေးကိုဆက်ဆံဖို့လိုပါလျှင်, Lee ကလူ့တန်းပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ရေနံအပြည့်အဝ spectrum ကိုအသုံးပြုထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေနေအကြံပြု.
“Essayez d’identifier les marques d’animaux qui fonctionnent réellement avec des vétérinaires”, Lee ကရှင်းပြခဲ့.
Shell က Stella CBD ပေးခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါပါဘူး, လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သူကပင်မိမိအနှောင်းပိုင်းတွင် Shiba Inu ပေးခဲ့တယ်, Bonsai, CBD l’huile jusqu’à la fin de sa vie pour soulager son arthrite – mais il s’est efforcé de garder les aliments de consommation humaine hors de sa portée. သူကအိမ်လုပ် brownie တစ်အတော်လေးနိမ့်ထိုးခဲ့ကြောင်းကံကောင်းခံစားရ, ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကပိုအစွမ်းထက် gelatin ထဲသို့ဝင်စေခြင်းငှါ.
“Si le chien avait mangé ça et mangé le tout”, Shell ကဆိုပါတယ်, သူကမကြာသေးမီကလက်ဆောင်အဖြစ်ခဲ့သော upscaling မြက်အတွက်သကြားလုံးတစ်သေတ္တာ evoking. “Cela aurait été désastreux. ငါသုံးဆကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခဲ့သေချာအောင်ခြေလှမ်းများယူကြပြီ [အဆိုပါပေါင်းပင်လှည့်ပတ်] ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကအလွန်ကောင်းသည်ငါရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမခြေရာခံခြင်းဂရုစိုက်မဟုတ်ထင်ဘယ်မှာသူတို့အားအရာတစျခုဖွင့်. "
ကံကောင်းစွာ, Stella လုံးဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည့်နေ့ 'လှိုင်းတံပိုးလုပ်ဖို့အဆင်သင့် "ခဲ့, နောက်ကျောကသူ့ပုံမှန်အတိုင်း hyper ပြည်နယ်မှ.
“Ce n’était pas une expérience terrible”, Shell ကဆိုပါတယ်. “Excepté la facture de soins d’urgence de 250 သို့ 300 $."